ပုံစံ 1 ပုံစံ 2
ပုံစံ3ပုံစံ 4
ကော်လံထဲမှာဘားအင်အားဖြည့် ARM101234567 8910
အ grillage ၏ရှုထောင့် Specify
ပွဲတွင်တန်းအရေအတွက် ARM201234567 8910
အင်္ဂတေ (50 ကီလိုဂရမ်၏အိတ်နှုန်း)
သဲ (1 တန်များအတွက်)
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက် (1 တန်များအတွက်)
Fitting များ (1 တန်များအတွက်)
ဒီမြို့ပတ်ရထားသို့မဟုတ် rectangular အခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူတိုင်ပေမည်။ ထိုအလှည့်လည်သို့မဟုတ် rectangular အဓိကအစိတ်အပိုင်းနှင့်အတူ။
B - အဆိုပါ width ကိုသို့မဟုတ်အချင်း။
H - အဓိကကိုယ်ခန္ဓာ၏အမြင့်။
A - ကော်လံ၏အခြေစိုက်စခန်း၏အမြင့်။ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲပုံလျှင်, အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်ကြပါဘူး။
D - ခြေရင်းရဲ့ width သို့မဟုတ်အချင်း။
D1 - ထိုစတုဂံအခြေစိုက်စခန်း၏အရှည်။
B1 - တစ်ဦး rectangular မှတ်တိုင် width ။
X - အခြေခံအုတ်မြစ်ရဲ့ width ။
Y - အခြေခံအုတ်မြစ်၏အရှည်။
X1 - ထောင့်၌အတိုင်အပါအဝင်အကျယ်အတွက်ကော်လံအရေအတွက်။
Y1 - တိုင်ထောင့်ကနေအပါအဝင်အရှည်ထမ်းဘိုးများ၏အရေအတွက်။
S - check လုပ်ထားပါက, ကော်လံတွက်ချက်ပါလိမ့်မည်, မြေတပြင်လုံးအိမျတျောကိုအောကျ၌အညီအမျှစီစဉ်ခဲ့သည်။ မလိုလျှင်, သာတိုင်အုတ်မြစ်ပတ်လည်အတိုင်းအတာ။
E - အ grillage ရဲ့ width ။
F - grillage ၏အမြင့်။
monolithic grillage ၏တွက်ချက်မှုမလိုအပ်ခဲ့လျှင်, ဤရှုထောင်မပါဝင်ပါဘူး။
ARM1 - တစ်ကော်လံအတွက်အားဖြည့်အရက်ဆိုင်အရေအတွက်။
ARM2 - အတိပ် grillage အတွက်ပွဲတွင်တန်းအရေအတွက်။
ARMD - ထိုအဆို့ရှင်များ၏အချင်း။ မီလီမီတာအတွက်အမြဲ Specify ။
ထိုအင်အားဖြည့်မလိုအပ်ခဲ့လျှင်, အတွက်တန်ဖိုးများသတ်မှတ်ထား 0.
ကွန်ကရစ်တစ်ကုဗမီတာများထုတ်လုပ်ဘို့ဘိလပ်မြေ၏အရေအတွက် Specify ။ ကီလိုဂရမျတှငျ။
အလေးချိန်အားဖြင့်, ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်များအတွက်အချိုးအစား Specify ။ ဤရွေ့ကားဒေတာတစ်ခုချင်းစီကိုအမှု၌ကွဲပြားခြားနားပါသည်။
သူတို့ကနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရသောကျောက်အရွယ်အစားနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးနည်းပညာ, ဘိလပ်မြေ၏အမှတ်တံဆိပ်ပေါ်မူတည်သည်။ အဆောက်အဦးပစ္စည်းပေးသွင်းသူများမှသူတို့ကို Specify ။
ရလဒ်အဖြစ် program ကိုအလိုအလျှောက်တွက်ချက်ပါလိမ့်မယ်:
များအတွက်ကွန်ကရစ် grillage အရေအတွက်။
ထိုဖောင်တွေနဲ့ device ကို monolithic columnar သို့မဟုတ်ပုံအခြေခံအုတ်မြစ်များအတွက်ပစ္စည်းများတည်ဆောက်ခြင်း၏ကုန်ကျစရိတ်။
တစ်ဦးချွတ်အခြေခံအုတ်မြစ်လျှောက်ထားရန်ချွေတာမကြာခဏအသုံးပြုဆိပ်ခံတံတားအုတ်မြစ်မသည်အဘယ်မှာရှိမြေအောက်ခန်းမပါဘဲဗတ်နှင့်အိမ်များ, အုတ်၏အလင်းမြို့ရိုး, အိမ်များနှင့်အတူနေအိမ်များသည်။ သူ၏အချိန်ကုန်ကိစ္စ၏တွက်ချက်မှု, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်တွက်ချက်မှုနှင့်အတူသင်၏အချိန်အများကြီးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်ပြုရန်လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီသင့်လျော်သောနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ, သင်နှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအတွက်လိုအပ်မယ့်ပါလိမ့်မယ်, သူတို့ရဲ့နံပါတ်နှင့်စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်ထွက်ရှာသည်။
ဆိပ်ခံတံတားအုတ်မြစ်တစ်ခု grillage အသုံးပြု. ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ကော်လံ၏ပုံစံရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားရိုးစွန်းဒေသများမှသယ်ဆောင်သို့မဟုတ်ပဲလေးလံသောမြို့ရိုး, ထုပ်နှင့်ဝေဖန်အဆောက်အဦအောက်, မြို့ရိုးသည်၏လမ်းဆုံမှာအဖြစ်ကောင်းစွာသကဲ့သို့, အနာဂတ်ဖွဲ့စည်းပုံ၏ထောင့်မှာတည်ရှိသည်။ ဝန်အထူးသဖြင့်မြင့်မားသည်အဘယ်မှာရှိသူတို့အားအရပ်တွင်။ Rostwerk အဆိပ်ခံတံတားအုတ်မြစ်မြှင့်တင်ရန်နှင့်တိုင်အကြားတစ်ဦးအမြင်အားဖြည်တံတားရှိပါတယ်ရန်။
ထိုကဲ့သို့သောသစ်ဆွေးသို့မဟုတ်ရေ-ပြည့်နှက်ရွှံ့မြေဆီလွှာများအဖြစ်ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သောသို့မဟုတ်အားနည်းသောမြေဆီလွှာရှိပါတယ်ဘယ်မှာ Apply ဆိပ်ခံတံတားအုတ်မြစ်အကြံပြုသည်မဟုတ်။ ဒီအမျိုးအစားနှင့်တစ်ဦးချွန်ထက်ဒေါင်လိုက်တစ်စက်ရှိဒေသများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုလျှောက်ထားမထားပါနဲ့။
ဆိပ်ခံတံတားအုတ်မြစ်ကပုဂ္ဂလိကအိမ်၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းစေအားသာချက်တစ်ခုအရေအတွက်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာတိပ်သို့မဟုတ်တစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါဖောင်ဒေးရှင်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်ပါသည်, အဆောက်အဦးပစ္စည်းများနှင့်၎င်း၏တည်ဆောက်မှုကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုချွေတာသုံးစွဲမှုနည်းကျုံ့ပေးသည်နှင့်မြေအောက်ခန်း၏စုစုပေါင်းဧရိယာလျော့ကျစေပါတယ်။ ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်ကိုထိရောက်စွာမြေဆီလွှာ၏နှင်းခဲလှူ၏အဖျက်သို့သက်ရောက်မှုကိုဆီးတား။
အောက်လွှတ်တော်ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်ထပ်နှင့်အခြေခံအုတ်မြစ်များထုတ်လုပ်ဘို့ပစ္စည်းတွေရဲ့အလေးချိန်နဲ့နံပါတ်ပေါ် မူတည်. ။ ဤကျောက်, အုတ်, ကွန်ကရစ်နှင့်အားဖြည့်ကွန်ကရစ်။ ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုအလိုအရရှေးကောကျနှငျ့အနိမ့်ဆုံးလက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အ ligation နည်းပညာကို Zabirko နှင့်အတူအသုံးပြုတဲ့အခါမြေပြင်အထက်နှင့် 250 မီလီမီတာအနေဖြင့်ပါလျှင်ဒီတော့ကွန်ကရစ်ရေးသားချက်များများအတွက်အပိုင်းအရွယ်အစားပန်းရံများအတွက် 600 မီလီမီတာ 380 မီလီမီတာထက်မနည်းပန်းရံများအတွက်ထက်လျော့နည်း 400 မီလီမီတာအမဖြစ်သင့်ပါဘူး။
လိုအပ်ခဲ့လျှင်ဆောက်လုပ်ရေးမပြုမီ, ကနုတ်မြောင်းနှင့်ရေစိုခံဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့, မိမိကိုအစားထိုးခြင်း, မြေအောက်ရေအဆင့်တည်နေရာကိုစီစဉ်ဖို့, မြေဆီလွှာတွင်ရေခဲအောင်အေး, အမျိုးအစားနှင့်မြေဆီလွှာ၏ဖွဲ့စည်းမှု၏အတိမ်အနက်ကိုထွက်ရှာရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဆိပ်ခံတံတားအုတ်မြစ်၏ဆောက်လုပ်ရေး9အဆက်ဆက်အဆင့်ဆင့်အတွက်နေရာကြာပါတယ်။
4. တိုင် formwork Installing ။
7. grillage ဖော်ဆောင်ရေး။
8. တိုင်အကြားဒါခေါ် Zabirko ခြံစည်းရိုးသို့မဟုတ်ရိုးတည်ဆောက်ခြင်း။
အိမျတျောကိုမြေဆီလွှာများ heaving ပေါ်တွင်တည်ဆောက်လျက်ရှိသည်လျှင်, ငါတို့သည်ဆောက်လုပ်ရေးစတင်ရွှေ့ဆိုင်းမဟုတ်နိုင်ပါ။ ဆောင်းတွင်းများအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်အလွတ်ကျန်ရစ်လျှင်, ပုံပျက်သောနိုင်ပါတယ်။
ရုံကွန်ကရစ်၏ထောက်ခံမှုများတွင်တင်ထားသောရက်ပေါင်း 30 အတွင်းအခြေချနေထိုင်သင့်ပါသည်။ ဤကာလအတွင်းသူတို့ကို loading အကြံပြုသည်မဟုတ်။
အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သောဘိလပ်မြေအမှတ်တံဆိပ် M400 နှင့်ကွန်ကရစ်ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်သေးငယ်တဲ့ကျောက်စရစ်နှင့်ကြမ်းသဲဖြည့်အဖြစ်။